Block B အဖွဲ့ဝင် P.O က သူမသဘောကျတဲ့ပုံစံပါလို့ ပြောပြလာတဲ့ မင်းသမီးချောလေး Moon Geun Young – Trend.com.mm
Block B အဖွဲ့ဝင် P.O က သူမသဘောကျတဲ့ပုံစံပါလို့ ပြောပြလာတဲ့ မင်းသမီးချောလေး Moon Geun Young
Posted on March 19, 2019 by Noel
နာမည်ကျော်တောင်ကိုရီးယားမင်းသမီးချောလေး Moon Geun Young ကတော့ သူမသဘောကျတဲ့ယောက်ျားလေးပုံစံက ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ
ဖွင့်ဟ၀န်ခံလိုက်ပါပြီ။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းက Moon Geun Young ဟာ MBC က စီစဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ “Those Who Cross The Line”အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာ သူမရဲ့ Ideal type က ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Moon Geun Young က “ထူးထူးခြားခြားသတ်မှတ်ထားတာတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ သူက ကျွန်မမျက်စိထဲကြည့်ကောင်းနေရင် အဲ့ဒီယောကျာ်းလေးက ချောတာပါပဲ။ပြီးတော့P.O ဆိုရင် သူ့မှာ ချိုသာတဲ့အပြုံးလေးရှိတယ်။တစ်ခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်း ကြင်ကြင်နာနာရှိတယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ကျွန်မသူ့ကို တီဗီမှာပဲ မြင်ဖူးတာပါ”လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။P.O ဆိုတာ Block B အဖွဲ့ဝင်အဆိုတော်လေးဖြစ်ပါတယ်။သူမက အဲ့ဒီလိုပြောအပြီးမှာ “ကျွန်မရှင့်ကိုအမြဲအားပေးနေမှာပါ”လို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
မတ်လ ၁၈ရက်နေ့ကတော့ P.O ဟာ “Hello Counselor”မှာ ဧည့်သည်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီး အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်း
ကြည့်ခဲ့ရာ P.O က ရှက်စနိုးနဲ့အရင်ပြုံးခဲ့ပြီး “ကျွန်တော်အဲ့ဒီသတင်းကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း သူမနဲ့အပြင်မှာတစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်လေးကတည်းက သူမရဲ့ ပရိသတ်ပါ။ပြီးတော့ ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလိုပြောလာတဲ့အတွက် ကျေနပ်ဝမ်းသာမိပါတယ်”လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။
အခုလတ်တလောမှာတော့ မင်းသမီး Moon Geun Young ဟာ “Catch Yoo Ryung” (ယာယီနာမည်)ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ကမ်းလှမ်းခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရော သူမကို ပြန်လည်အားပေးဖို့အသင့်ပဲလား?
နာမညျကြျောတောငျကိုရီးယားမငျးသမီးခြောလေး Moon Geun Young ကတော့ သူမသဘောကတြဲ့ယောကျြားလေးပုံစံက ဘယျလိုမြိုးလဲဆိုတာဖှငျ့ဟဝနျခံလိုကျပါပွီ။မကွာသေးခငျရကျပိုငျးက Moon Geun Young ဟာ MBC က စီစဉျထုတျလှငျ့တဲ့ “Those Who Cross The Line”အစီအစဉျမှာပါဝငျခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။အဲ့ဒီအငျတာဗြူးမှာ သူမရဲ့Ideal type က ဘယျလိုလဲဆိုတာကိုလညျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
Moon Geun Young က “ထူးထူးခွားခွားသတျမှတျထားတာတော့မရှိပါဘူး။ဒါပမေဲ့ သူက ကြှနျမမကျြစိထဲကွညျ့ကောငျးနရေငျ အဲ့ဒီယောကျြားလေးက ခြောတာပါပဲ။ပွီးတော့P.O မှာ ခြိုသာတဲ့အပွုံးလေးရှိတယျ။တဈခွားသူတှအေပျေါမှာလညျး ကွငျကွငျနာနာရှိတယျလို့ ကြှနျမထငျပါတယျ။ကြှနျမသူ့ကို တီဗီမှာပဲ မွငျဖူးတာပါ”လို့ပွောခဲ့ပါတယျ။P.O ဆိုတာ Block B အဖှဲ့ဝငျအဆိုတျောလေးဖွဈပါတယျ။သူမက အဲ့ဒီလိုပွောအပွီးမှာ “ကြှနျမရှငျ့ကိုအမွဲအားပေးနမှောပါ”လို့ပွောခဲ့ပါသေးတယျ။
မတျလ ၁၈ရကျနကေ့တော့ P.O ဟာ “Hello Counselor”မှာ ဧညျ့သညျအဖွဈပါဝငျခဲ့တယျလို့သိရပွီး အဲ့ဒီအကွောငျးနဲ့ပတျသကျလို့မေးမွနျးကွညျ့ခဲ့ရာ P.O က ရှကျစနိုးနဲ့အရငျပွုံးခဲ့ပွီး “ကြှနျတျောအဲ့ဒီသတငျးကို တှေ့ခဲ့ပါတယျ။ကြှနျတျောလညျး သူမနဲ့အပွငျမှာတဈခါမှ မတှဖေူ့းပါဘူး။ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောက ငယျငယျလေးကတညျးက သူမရဲ့ပရိသတျပါ။ပွီးတော့ ကြှနျတျောနဲ့ပတျသကျပွီး အခုလိုပွောလာတဲ့အတှကျ ကနြေပျဝမျးသာမိပါတယျ”လို့ပွောလာခဲ့ပါတယျ။
အခုလတျတလောမှာတော့ မငျးသမီး Moon Geun Young ဟာ “Catch Yoo Ryung” (ယာယီနာမညျ)ဇာတျလမျးတှဲမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျဖို့ကမျးလှမျးခံထားရတယျလို့သိရပါတယျ။ပရိသတျကွီးရော သူမကို ပွနျလညျအားပေးဖို့အသငျ့ပဲလား?
ကော်ဖီကိုသာ လုံးဝမသောက်ပဲနေမယ်ဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ…
US Vogue မဂ္ဂဇင်းကာဗာမှာ ဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့ ပထမဆုံး တောင်ကိုရီးယားမင်းသမီး Bae Doona